Forum serasera malagasy manana trompe bouché nefa te hanan-janaka - Dinika forum.serasera.org
manana trompe bouché nefa te hanan-janaka
Fitohizan'ny hafatra : manana trompe bouché nefa te hanan-janaka
famenohasambarana - 18/10/2016 14:17
bjr,izaho dia manana olana tsy ahafahana miteraka,rehefa avy natao radio ny tranon-jaza dia hita fa bouché ny trompe iray ary phimosis izany hoe tery ny trompe iray,sao dia misy mitovy cas amiko ka afaka manoro hevitra? Misaotra mialoha
endriny - 20/10/2016 09:04
Tena mirary soa ho anao.
Fa hono ho'a aloha. Tokony naharary anao ilay iray tsentsina hatramin'izay sa tena tsy tsapanao ilay izy
Arakaraky taona moa fa azo sokafana amin'ny fandidiana ihany ilay tsetsina raha tsy efa atrophie koa ny ovairenao. Fa ilay tery aloha mbola azo avotana tsara. Mihinana zavatra mampafana kibo ianao, manao Yoga kely sy mandeha tongotra na mitoto vary fa mipetra-dava ianao ka izay no mahatery sy mahatsentsina an'ireo taova ireo. Manatona ihany koa mpanotra.
Sarotra ihany aloha kanefa... io mantsy izao, tsy koa ny ovaire miasa dia lasa mihena daholo ny tahan'ny hormone rehetra, saingy iny azo soloina fanafody ihany.
Ravimbomanga na anapatsa sy patsa na trondro atao laoka matetika dia asio sakamalao. (Sakafo mba manampy io fa tsy fanafody akory). Aza mihinana zavatra vita amin'ny soza raha mety.
Dia mirary soa
famenohasambarana - 28/10/2016 15:10
Misaotra betsaka anao namaly,tsy nahatsapa narary zaho fa nony ela tsy nahazo zaza dia nanatona mpanotra,reninjaza,ary gynéco maro ary rehefa nasainy natao radio HSG dia hita fa tsentsina ny trompes roa.
Nandramana natao insuflation,hydrotubation dia avy eo namerina radio indray ary teo no nahitana io résultat io oe phimosis ny iray dia mbola tsentsina ihany ny droite.
Ilay gynéco nitsabo ahy tao amin'ny Clinique Noa no niteny fa kely ny chance raha mbola hanao insuflation sy hydrotubation fa aleo hoy izy didina ary nasainy nakany amin'i Docteur José ao Antsakaviro fa izy no mandidy eny amin'ny CMA.
Efa tany zaho tamin'ny alatsinainy teo dia tsisy hevitra hoy izy fa tsy maintsy didina atao coelioscopie hono,nefa ny sarany dia tena lafo dia lafo.
Mankasitraka anao nahafoy fotoana namaly ary nanome sosonkevitra ,tena marina io voalazanao io fa mety ilay mipetraka lava no anisan'ny antony mahatonga ilay olana satria ny asako dia matetika mipetraka foana.
Hampihariko ireo torohevitra nomenao,ary hivavaka hatrany fa mila ho kivy sy ketraka.
Mamerina ny fisaorana ary mirary soa ho anao ihany koa.
endriny - 28/10/2016 19:37
Dia mirary ny soa sy ny tsara mandrakariva ho anao.
famenohasambarana - 31/10/2016 11:30
Toussaint2019 - 15/10/2019 13:41
Saika mba anontany ramety azafdy hoe nanao ahoana kai ny tohiny ny fitsaboina nataonao?manana olana mitovy aminao aho mantsy; tsetsina iany ko n trompe